နီဗီလီဖာနန်ဒိုဆေးရုံ သည် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံတွင် တည်ရှိသည့် ဆေးရုံတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ နည်းပညာမြင့်စောင့်ရှောက်သင်ကြားရေး ဆေးရုံတစ်ခု ဖြစ်သည်။ သီရိလင်္ကာရှိ အကြီးဆုံးသော ကိုယ်ပိုင်ဆေးရုံတစ်ခုဖြစ်ကာ ခုတင် ၂၁၀ ဆံ့ကာ လူနာတစ်နေ့လျှင် ၁၀၀၀ ခန့် ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်သည်။ South Asian Institute of Technology and Medicine ၏ သင်ကြားရေးဆေးရုံလည်း ဖြစ်သည်။ NFH သည် Millennium Drive, off Chandrika Kumaratunga Mawatha, Malabe 10115 တွင် တည်ရှိသည်။ NFH ကို တည်ထောင်ရန် ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ ဒေါက်တာဖာနန်ဒိုက စိတ်ကူးရခဲ့ပြီး SAITM ရှိ ဆေးကျောင်းသားများအတွက် ဆေးပညာနှင့်ပတ်သက်သည်များကို သင်ကြားပြ ...
ဂရိဒဏ္ဍာရီတွင် ထရိုဂျန်စစ်ပွဲ ကို အခီးယန်ဇ် ခေါ် ဂရိများက ထရွိုင်မြို့ကို ဆင်နွှဲသည့် စစ်ပွဲဖြစ်ကာ စစ်ဆင်ရခြင်းအကြောင်းမှာ စပါတာဘုရင် မန်နစ်လေးယပ်စ်၏ဇနီး၊ ထရွိုင်မြို့မှ ဟယ်လန်ကို ပဲရစ် မင်းသားက ခိုးယူခေါ်ဆောင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဂရိဒဏ္ဍာရီ၌ ထရိုဂျန်စစ်ပွဲသည် အရေးပါဆုံးသော ဖြစ်ရပ်များထဲက တစ်ခုဖြစ်ပြီး များမြောင်လှသော ဂရိစာပေလက်ရာများမှတဆင့် ပြန်လည်ပြောပြကြသည့် အကြောင်းလည်းဖြစ်ကာ ထင်ရှားသည်မှာ ဟိုးမား၏ အိလိယဒ် ကဗျာရှည်ဖြစ်၏ ။ အိလိယဒ်ကဗျာလင်္ကာ၏ အဓိကအပိုင်း တွင် ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုမျှကြာညောင်းသော စစ်ပွဲ၏ ဆယ်နှစ်မြောက်၌ လေးရက်နှင့် နှစ်ညတာအဖြစ်အပျက်ကို ဖော်ပြထားသည်။ အောဒဆီကဗျာတွင် စစ်ပွဲပါသူရဲကော ...
ဆေးပညာဆိုသည်မှာ ကုသခြင်းနှင့် ဆိုင်သော သိပ္ပံပညာသာ မက အနုပညာတစ်မျိုးဟုလည်း ခေါ်ဆိုနိုင်သည်။ ဆေးပညာတွင် ကာကွယ်ခြင်းနှင့် ကုသခြင်းဖြင့် လူသားတို့၏ ကျန်းမာရေးကို ထိန်သိမ်းရန် သို့ ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန် အတွက် အမျိုးမျိုးသော ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့် ဆိုင်သော လုပ်ငန်းစဉ်များပါဝင်နေသည်။ ခေတ်သစ်ဆေးပညာတွင် ကျန်းမာရေးသိပ္ပံ ၊ ဇီဝဆေးပညာ သုတေသတန နှင့် ကျန်းမာရေး နည်းပညာတို့ကို အသုံးပြု၍ ပုံမှန်အားဖြင့် ဆေးပေးခြင်း၊ခွဲစိတ်ခြင်းနှင့် အခြားကုသနည်းလမ်းများဖြင့် ထိခိုက်မှုနှင့် ရောဂါတို့ကို ဆန်းစစ်ရန်နှင့် ကုသရန် အသုံးပြုသည်။ ဆေးပညာ၏ အင်္ဂလိပ်ဝေါဟာရ medicine သည် လက်တင်ဘာသာစကား ars medicina မှ ဆင်းသက်လာပြီး ကုသခြင်း အနုပညာဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ ဆေးဖက်ဆိုင်ရာ နည်းပညာနှင့် လက်တွေ့ကုသရေးတွင် ကျွမ်းကျင်မှု တို့မှာ ခေတ်သစ်ဆေးပညာ၏ ကျောရိုးများဖြစ်သော်လည်း တကယ်တမ်း အောင်မြင်စွာကုသနိုင်ရေးအတွက်မူ လူနာနှင့် မျက်နှာခြင်းဆိုင်၍ သာမန်လူသားတို့၏ ခံစားမှုနှင့် အရေးတယူဂရုစိုက်မှု အစရှိသောအရာများကို ပြသရန်လိုပြီး အင်္ဂလိပ်တွင် "bedside manner" ဟုခေါ်ကြသည်။
ဆေးပညာနှင့်ဆိုင်သော ရှေးဦးပိုင်းမှတ်တမ်းများကို အိန္ဒိယတိုက်တွင် ရှိသော အာယုဗေဒ ဆေးပညာ၊ ရှေးခေတ် အီဂျစ်ဆေးပညာ၊ တရုတ်ရိုးရာဆေးပညာ၊ အမေရိကား နှင့် ရှေးခေတ်ဂရိဆေးပညာတို့တွင် တွေ့ရသည်။ ဆေးပညာ၏ ဖခင်ကြီးဖြစ်သော ဟစ်ပိုကရေးတီး Hippocrates သည် ကျိုးကြောင်းဆက်စပ် တွေးခေါ်မှုနှင့်ဆိုင်သော နောက်ပိုင်းခေတ် ဆေးပညာ၏ အခြေခံအုတ်မြစ်များကို ချခဲ့ကြသည်။ ဟစ်ပိုကရေးတီးသည် ဆရာဝန်များ လိုက်နာရန် ကျင့်ဝတ်နှင့်ကျမ်းကျိန်လွှာ ဟစ်ပိုကရေးတစ် အုတ်သ်Hippocratic Oath ကို စတင် မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး ထိုကျမ်းကျိန်လွှာကို ယခုတိုင် အသုံးပြုနေဆဲဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ဟစ်ပိုကရေးတီးသည် ရောဂါများကို acute, chronic, epidemic & endemic ဆိုပြီး အမျိုးအစားခွဲခဲ့သည့် ပထမဆုံးလူ ဖြစ်ပြီး ဆေးပညာအခေါ်အဝေါ်များဖြစ်သည့် "exacerbation, relapse, resolution, crisis, paroxysm, peak, and convalescence" တို့ကို သုံးစွဲခဲ့သည်။ ဂရိသမားတော် ဂေလင် Galen သည် ရှေးခေတ်ဆေးပညာလောက၏ ကြီးကြယ်သော ခွဲစိတ်ဆရာဝန် တစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့ပြီး ဦးနှောက်ခွဲစိတ်ခြင်း၊ မျက်စိခွဲစိတ်ခြင်းတို့ အပါအဝင် ခွဲစိတ်ခြင်း မြောက်များစွာကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
၁၄ ရာစုနှင့် ၁၅ ရာစု ပလိပ်ကပ်ရောဂါ ဖြစ်ပွားချိန်တွင် ဆေးပညာ အတွေးခေါ်များမှာ ယခင် ရှေးရိုးစွဲ ယူဆမှုများမှ သိပ္ပံနည်းကျ ဆေးပညာဘက်ကို တဖြည်းဖြည်း ပြောင်းလဲလာခဲ့သည်။ "ယခင်က ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူတို့က မှန်သည်ဟု ပြောသည့်အတွက် မှန်သည်။ ထိုသူတို့ ပြောသည့်အတိုင်း ဖြစ်သည်။ ထိုသူတို့ ပြောသည်မှ သွေဖီခဲ့ပါက မှားယွင်းသည်" ဟူသော ရှေးယူဆချက်များကို ငြင်းပယ်လာကြသည်။ ဗက်စလီးရက်စ် Vesalius ကဲ့သို့ သမားတော်များကလဲ အရင်က မှားယွင်းသော ယူဆချက်များကို မှန်ကန်အောင်၊ အချို့ယူဆချက်တို့ကို ပိုကောင်းအောင် ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
Chief Complaint cc: လူနာ ဆေးရုံ သို.မဟုတ် ဆေးခန်းကို လာရောက်ရသည်. အဓိက အကြောင်းအရာ ဖြစ်သည်။ လူနာပြောသော စကားလုံးအတိုင်း မှတ်သားလေ.ရှိပြီး လက္ခဏာခံစားရသည်. အချိန်ပမာဏပါ ထည်.သွင်း မှတ်သားသည်။ ဥပမာ - ၂ နာရီကြာ ဗိုက်အောင်.ခြင်း
History of Present Illness HOPI – လူနာ ခံစားရသည်. လက္ခဏာများကို စတင် ဖြစ်ပေါ်လာသည်မှ အစပြုပြီး မေးသားရသည်။ လိုအပ်သော အကြောင်းအရာများကို ထည်.သွင်း မေးမြန်းရသည်။ ဥပမာ - လွန်ခဲ.သော ၂ နာရီက ထမင်းစားတယ်။ ထမင်းစားပြီး ဗိုက်အောင်.လာတယ်။ ရင်ခေါင်းကနေ ပူပြီး အောင်.တယ်။ လှဲလို.လဲ မသက်သာ၊ ထိုင်လို.လဲ မသက်သာ ဖြစ်နေတယ်။ လေဆေးစားကြည်.ပေမဲ. မထူးခြားဘူး။ အန်တော. မအန်ဘူး။
Medications Rx – လက်ရှိ သုံးစွဲနေသော ဆေးများ အနောက်တိုင်းဆေး၊ မြန်မာဆေး၊ တိုင်းရင်းဆေး၊ ဆေးရွက်၊ ရိုးရာကုထုံးများ၊ ဆေးမတည်.ခြင်းများကို မေးမြန်းရသည်။
Past Medical History PMH – ယခင်က အလားတူ ရောဂါဖြစ်ဖူးခြင်း ရှိမရှိ၊ အခြားဖြစ်ဘူးသော ရောဂါ၊ ခွဲစိတ်ခံရခြင်း၊ မတော်တဆ ထိခိုက်ခြင်း၊ ဆေးရုံတက် ကုသခံရခြင်းများ စသည်တို.ကို မေးမြန်းရသည်။ ယခင် ဆေးမှတ်တမ်းဟောင်းများသည် ရောဂါ ရှာဖွေ၊ ကုသရှာတွင် အလွန် အရေးပါပါသည်။
Social History SH – မွေးရပ်၊ လက်ရှိ နေထိုင်ရာ နေရာ၊ အိမ်ထောင်စု ဦးရေ၊ အိမ်ထောင် အခြေအနေ၊ အလုပ်အကိုင်၊ ဝင်ငွေ၊ ဆေးလိပ်၊ အရက် သုံးစွဲခြင်း၊ ထမင်းစားသုံးမှု ပုံစံ အစရှိသည်တို.ကို မေးမြန်းရသည်။
Family History FH – မိသားစုဝင် သို.မဟုတ် အတူနေ သို.မဟုတ် အိမ်နီးချင်းများတွင် အလားတူ ရောဂါဖြစ်ခြင်း ရှိမရှိ၊ ယခင်က ရောဂါဖြစ်ဖူးခြင်း ရှိမရှိ၊ မိသားစုဝင်များတွင် အခြား မျိုးရိုးလိုက် ရောဂါဖြစ်ဖူးခြင်း ရှိမရှိ
System Review – မေးမြန်းချိန်တွင် ကျန်ခဲ.နိုင်သည်. အချက်အလက်များကို မကျန်စေရန် တကိုယ်လုံး ခြုံငုံပြီး မေးမြန်းခြင်း နှလုံးနှင်. သွေးကြောဆိုင်ရာ၊ အဆုတ်နှင်. ဆိုင်ရာ၊ အစာအိမ် အူလမ်းကြောင်းနှင်. ဆိုင်ရာ၊ ဆီးလမ်းကြောင်းနှင်. ဆိုင်ရာ၊ ဦးနှောက်နှင်. အာရုံကြောနှင်. ဆိုင်ရာ၊ အခြား သတိမထားမိသော အချက်အလက်များ ကိုယ်အလေးချိန် လျော.သွားခြင်း၊ ဖျားခြင်း၊ အလုံး၊ အကျိတ် စမ်းမိခြင်း
လူနာ၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အခြေအနေ သတိရှိ သလား၊ ရူးနေသလား စသည်
အသားအရည် နဲ. လက်သည်းများ
ဗိုက်နှင်. အစာလမ်းကြောင်း ကိုယ်ဝန်ရှိက ကလေးအခြေအနေ
ကြွက်သားများ၊ အရိုးအဆစ်များ၊ ခြေလက်များ
အရေးကြီးသော အချက်အလက်များ vital signs - ကိုယ်အပူချိန် temperature, သွေးပေါင်ချိန် blood pressure, သွေးခုန်နှုန်း pulse, အသက်ရှူနှုန်း respiratory rate, သွေးထဲရှိ အောက်စီဂျင် ပမာဏ oxygen saturation
ဆီးလမ်းကြောင်းနှင်. မျိုးပွား အစိတ်အပိုင်းများ
ဦးနှောက်နှင်. အာရုံကြောဆိုင်ရာများ သတိလစ်နေလား၊ အမြင်အာရုံကောင်းလား၊ အာရုံကြော ကောင်းလား စသည်
လူနာ တကိုယ်လုံး ခြုံကြည်.ခြင်း - လူနာ၏ အရပ်အမောင်း၊ အလေးချိန်၊ အသားဝါနေခြင်း၊ ဖြူဆုတ်နေခြင်း စသည်
ခေါင်း၊ မျက်စိ၊ နား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်း
အသက်ရှူ လမ်းကြောင်းနှင်. အဆုတ်ဆိုင်ရာများ